Cozy na chiri anya ụlọ oriri na ọ restaurantsụ inụ na Madrid | Akụkọ Njem
Maria | | Spain obodo, Madrid
Foto | Atụmatụ Madrid
Na Madrid enwere ọtụtụ ụlọ nri ebe ị nwere ike iri nri nke ọma, mana ịhọrọ naanị otu n'ime ha maka mgbede ịhụnanya ma ọ bụ ikwupụta ịhụnanya gị adịghị mfe. Nke a bụ nhọrọ nke ụfọdụ ụlọ oriri na ọ theụ mostụ mara mma kachasị mma na isi obodo. A na-eri nri ya, tụlee ma nwee obi ụtọ na gburugburu ebe pụrụ iche, na-akpachi anya ma na-anabata ndị ọbịa.
3 Bangalore Nri Indian nke oge a
N'ịbụ nke dị na Calle Velázquez 39, trattoria a dị egwu emeghere ọnụ ụzọ ya na Madrid n'oge na-adịbeghị anya iji weta atụmatụ ngwakọ n'etiti ọdịnala gastronomic Italiantali na ụdị ihe ndị Spain dị ka anụ ezi ma ọ bụ ehi, bụ ndị mba ụwa ghọtara maka ogo ha. Nsonaazụ bụ kichin gourmet nwere uru kacha mma maka ego.
Ejiri aha ya wee chọọ mma ụzọ ya na ụfọdụ okooko osisi mara mma anaghị eme onye ọbịa ahụ ihe na-echere ha mgbe ọ na-abanye n'ọnụ ụzọ ya: mpaghara 900 m2 nwere nkọwa okomoko dị iche iche kewara n'ime oghere dị iche iche, nke ọ bụla nwere ya mmụọ nke ha, ha na-enye ọhụma ọhụụ na nleta ọ bụla. Ihe mbu ị huru bụ neon dị egwu nke ghọrọ otu n'ime ebe kachasị ese foto mana Bel Mondo juputara na nkuku dị mma maka ụdị ọ bụla.
Dịka ọmụmaatụ, ime ụlọ mmanya a na-eji 30.000-vintage vinyls eme ihe nke XNUMX zuru oke maka isoro mmanya ma ọ bụ ndị enyi gị nwee mmanya. Mana maka ụbọchị ihunanya, mbara ala gị bụ ebe kachasị mma. A na-agba ya okooko osisi ndị mara mma ma na-acha odo odo yana pergolas, e nwere ọbụna oghere a na-akpọ ọwara nke ịhụnanya, dịkwuo nso ma chọọ ya mma na osisi.
Fọdụ n'ime nri ndị a tụrụ aro na Bel Mondo bụ "Croquestar", "burrata dolce" ma ọ bụ "papardelle na atụrụ ragout", n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Maka ihe eji megharịa ọnụ, achicha «Te queso mucho» ma ọ bụ «tiramisu» bụ efere nri abụọ.
Saporem nwere ebe mara mma abụọ na mpaghara Chueca (Calle de Hortaleza, 74) na mpaghara Las Letras (Calle de Ventura de la Vega, 5) nke zuru oke maka ụbọchị ihunanya n'ihi ekele mara mma na ikuku ha. Ha abụọ nwere ime ime ụlọ etubere ugo dị ka okpu nke oriọna ọkụ, iko na rattan na-enye ya anwansi pụrụ iche. Ogige Saporem dị na mpaghara Las Letras dị ntakịrị karịa ya mere enwere ohere maka otu ndị na-egwu egwu egwu site na Wenesde ruo Satọde.
Banyere menu nri, ọ bara uru ịkọ na ọ sara mbara ma na-enye atụmatụ okike dabere na nri Mediterranean na ntụgharị nke oge a. Akwadoro nke ọma bụ salad Saporem, ọkụkọ na mango na-apụta ma ọ bụ pizzinye mbinye aka, n'etiti ọtụtụ nri ndị ọzọ. Banyere desserts, gosi karọt ha na-arụ n'ụlọ, velvet uhie na achịcha chocolate.
Emechara aka na ahụmahụ a na ụlọ oriri na ọ thisụ thisụ a mara mma nke dị n'etiti Madrid bụ nri na-atọ ụtọ nke mmanya, nke ochie na mbinye aka, nke ha na-enye. Ihe atụ ụfọdụ bụ sangrías ha na cava na strawberries, bonsai, ejiji ochie ma ọ bụ Madame Cuervo.
Bangalore Nri Indian nke oge a
Ebe ha dị na 63 Diego de León Street dị na Bangalore, ha na-ewetara nri ndị India kachasị mma nwere mmetụ mbụ, nke na-agaghị ahapụ okpokoro isi ọ bụla. Iji mee ka ahụmịhe njem a nke ihe ụtọ na India zuru oke, ha kee site na ịchọ mma ogige mara mma nke nwere ọtụtụ ahịhịa, tebụl marble, ọmarịcha mpempe akwụkwọ na oriọna pai pai nke na-echetara Asia.
E kere ụlọ oriri na ọ intoụ intoụ ahụ ụzọ abụọ: nke mbụ chere ihu n'okporo ámá ma nwee mpaghara mmanya, ebe nke abụọ nọ n'ala ụlọ ebe ha tinye obere patio na osisi. Nsonaazụ bụ ebe udo mara mma, ebe izu ike iji zuru ike ma mee ka uche gị na ezigbo ụlọ gị buru gị.
Bangalore menu dị iche iche ma saa mbara. Ọ bụ achịcha curry ("Chicken Korma", "Chicken Tikka Masala", "Lamb Madras", "Balti Salmon") na akwụkwọ nri, nke Bengen Masala, aubergines na ngwa nri na ihendori dị ọkụ, pụtara. Iso eso Pilau na Naan osikapa na imecha were mmetuta di uto na nke di uto, odighi ihe kariri Mango Lassi. Ndị na-ekweghị ekwe nwere nri na-atọ ụtọ nke na-enyere ha aka ịnwale nke kachasị mma na menu n’enyeghị ihe ọ bụla.
Na Padre Claret 1 n'okporo ámá, na ógbè Prosperidad, Ottica bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ nke nwere mmụọ na-eto eto na nke na-emeghe mmụọ nke gosipụtara na menu ya na mma ya. Site n'ụdị ọgbara ọhụrụ na nke avant-garde, ihe na agba ndị eji eme ihe na-enye mmetụta na-ekpo ọkụ nke na-enyere ndị na-eri nri aka ịnụ ụtọ mgbede na-eso egwu dị mma nke na-anaghị akpaghasị mkparịta ụka ahụ.
Isi ihe ga-eme ka ọ nwee ihe ịga nke ọma bụ itinye aka ya na ngwaahịa dị mma yana ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. Nchịkọta nhọrọ dịgasị iche iche dịka ọ mejupụtara efere iri anọ ịhọrọ site na ya, ndị mbido bụ ezigbo ọrụ ebube bụkwa ndị zuru oke maka ịkekọrịta. Otu n'ime nri kpakpando ya bụ pink Russian salad, zuru oke iji gwọọ na netwọkụ mmekọrịta. Ihe ọzọ agaghị efu gị bụ ọkụkọ na akwukwo nri gyozas na kimuchi Mayonezi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Cozy na ezigbo ụlọ oriri na ọ restaurantsụ inụ na Madrid